Tag: ụlọ ọrụ ịde blọgụ | Martech Zone
Tag: ụlọ ọrụ ịde blọgụ
Usoro Ntuziaka 9 iji mepụta Blog kachasị maka Search
Agbanyeghị na anyị dere Corporate Blogging For Dummies ihe dịka afọ 5 gara aga, obere agbanweela na atụmatụ izugbe nke ọdịnaya ọdịnaya site na blọọgụ ụlọ ọrụ gị. Dabere na nyocha, ozugbo ị dere ihe karịrị 24 blog posts, blọgụ okporo ụzọ na-abawanye site na 30%! Ihe omuma ihe omuma a site na Mepụta akwa na-agabiga site na omume kacha mma maka ịchebe blog gị maka ọchụchọ. Adịghị m ere na ọ bụ ihe kacha ndu… ma ọ bụ ezigbo mma.
Weebụ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha maka ozi maka ndị niile na-ege ntị yana ọ dị mkpa iji hụ na ọ bara uru ma na-emetụta ihe ka ndị mmadụ na azụmaahịa wee gbalịsie ike. Ntughari dijitalụ na-achọ. Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịdị iche, dị mkpa ma dị ọhụrụ ma nwee ọdịnaya ozugbo chọrọ itinye ndị na-agụ ya aka. Ọdịnaya kwesịrị ịdị nkọ, ọ kwesịrị ịdị na-akpali akpali ma ọ kwesịrị ịkọwa. Ọ bụghị banyere idebe; obu banyere idu ndu
Akwụkwọ ọgụgụ maka B2B Azụmaahịa Onlinentanetị
Thursday, August 7, 2014 Wenezde, August 6, 2014 Douglas Karr
Nke a bu ezigbo ihe omuma banyere usoro esi etinye aka na uzo ahia ahia na ahia. Ka anyị na ndị ahịa anyị na - arụ ọrụ, nke a dịkarịrị anya na nkenke njikọ anyị niile. Naanị ịme ahịa B2B n'ịntanetị agaghị eme ka ihe ịga nke ọma karịa na weebụsaịtị gị agaghị eme ka azụmahịa ọhụrụ pụta n'ihi na ọ nọ ebe ahụ ma ọ dị mma. Chọrọ usoro ziri ezi iji dọta ndị ọbịa ma gbanwee
Wednesday, February 19, 2014 Wednesday, February 19, 2014 Douglas Karr
Youtụlela ihe ndị ọzọ na-ere ahịa dijitalụ na-arụ ma a bịa na atụmatụ ịzụ ahịa ọdịnaya, gụnyere ịde blọgụ, mmepụta, ịkekọrịta, na mmesho? Tinyere HQBook, Oracle Eloqua gosipụtara otú ndị na-ere ahịa dijitalụ si aza azịza nke atụmatụ ọdịnaya na ihe ọmụma a. Anyi choro iji aka ahia ahia ahia ahia site na ighota ihe omuma, ihe nwe, na ugwo mgbasa ozi - ihe ndi ahia ahia na-agbaso-yana otu esi edeputa ọdịnaya na njem ndi ahia,
SEO anwuola. Ekwuru m na ihe karịrị otu afọ gara aga, m ka nwere ụfọdụ ndị SEO na-ewe iwe na-aza ajụjụ na post kwa izu. Google gara n'ihu ịpị anyị egwuregwu SEO nke ndị folks na-egwu iji kpọọ ọkwa nke ndị ahịa ha - na ọtụtụ n'ime ha ka na-ata ahụhụ taa. Ndi nke anyị dọpụtara ndị ahịa anyị n’ọkụ na-eme nke ọma. Enwere m mmetụta dị iche iche na nke a
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 25, 2013 Douglas Karr
Cheta mgbe ndị bekee na - ekwu na ịde blọgụ anwụọla? Anọla m ịde blọgụ ugbu a ruo afọ iri ma kwụrụ m ihe ịga nke ọma, akwụkwọ m, ụlọ ọrụ m na ọrụ m maka ịde blọgụ. Kemgbe ọtụtụ afọ nke ịde blọgụ, enwere m ikike, ikike na nke zuru ezu nke na-esote na anyị nwere ike ịkwado azụmaahịa na-eto eto na-enyere ndị ahịa anyị aka ịgbalịsi ike ịre ahịa ọdịnaya ha. Anaghị m ekwu maka uru ọ bụla - M na-aga n'ihu na-erite uru! Nke a bụ